ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၂) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on November 28, 2013 at 9:25 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ရုံးတွင်းအထွေထွေစကားစမည်ပြောစရာတွေဟာတကယ်တော့ မိမိသိပြီးသားစကားလုံးတွေ အပေါ်မှာပဲအခြေခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ပြောဖို့လိုအပ်တဲ့အခါ ၀ါကျအဖြစ် ထွက်မလာတာ၊ ပြောတတ်တဲ့သူပြောတဲ့အခါမှ “သြော် ဒါလေးများ သိတာပေါ့” ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ input နည်းလို့ဖြစ်ရတာပါ။ မြင်ဖူး၊ ကြားထူးထားတဲ့ဝါကျလေးတွေကို အထပ်ထပ်လေ့ကျင့်လိုက်ရင် အလွယ်တကူပြောလာနိုင်မှာပါ။
ရုံးတစ်ခုမှာ မလွဲမသွေထားရှိရမည့်ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ ဖိုင် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
"Do you know where the ABC file is at?"
"Do you have the ABC file?"
ABC ဖိုင်ခင်ဗျားဆီမှာ ရှိလား။
"Is anybody using the ABC file right now?"
တစ်ယောက်ယောက်များ ABC ဖိုင်ကိုသုံးနေလား။
"Did you check the file cabinet? It should be there."
ဖိုင်ထားတဲ့ဗီရိုထဲမှာ စစ်ကြည့်ပြီးပြီလား။ အဲဒီမှာရှိနိုင်တယ်။
"Check the bin. Sometimes people throw it in there after they are done."
အမှိုက်ပုံးထဲစစ်ကြည့်လိုက်ဦး။ တစ်ခါတစ်လေလူတွေကသူတို့သုံးပြီးရင် အဲဒီထဲလွှင့်ပစ်ထားတတ်တယ်။
"Oh... it's on my desk. I forgot to put it back."
အိုး ငါ့စားပွဲပေါ်မှာ။ ပြန်ထားဖို့မေ့သွားတယ်။
"It's in my office. I'll get it for you."
ရုံးထဲမှာ မိမိသုံးလိုတဲ့ ဖိုင်တစ်ခု၊ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို သူများစားပွဲပေါ်မြင်တဲ့အခါ ငှားယူတောင်းရမ်း ရပါမယ်။ အောက်မှာနမူနာပြောစရာအမေးအဖြေလေးတွေပေးထားပါတယ်။
"Are you using this book right now?"
"Can I borrow this book?"
"Are you finished with this file?"
"Are you done with this report?"
"Can I use this file?"
တစ်ခုခုလိုအပ်လျှင် ရုံးထဲက တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်လိုက်မေးရတတ်တာဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းကို ask round ဟုခေါ်သည်။ အောက်တွင်မေးခွန်းနမူနာများပေးထားပါသည်။
"Do you have an extra mouse? Mine broke."
"Do you have another network cable? The one I have is too short.
"Do you haveablank DVD I can have?"
"I ran out of labels. Do you have any I can have?"
လိပ်စာကတ်(တံဆိပ်) ကုန်သွားပြီ။ ခင်ဗျားမှာရှိရင်နည်းနည်းရနိုင်မလား။
"Can I borrow your stapler?"
"Do you haveahole puncher?"
"Do you haveastaple remover by any chance?"
ကုမ္ပဏီတိုင်းမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု၊ ခဏအနားယူချိန်၊ အားလပ်ရက်ခွင့် စသည့် မူဝါဒများ သီးခြားရှိနိုင်ပါတယ်။ လူသစ်တစ်ယောက်ဆိုရင် အဆိုပါ ပေါ်လစီများကို သိလိုတဲ့အခါ ကိုယ့်ထက်ဝါရင့်တဲ့သူတွေကို ဒီလိုမျိုးတွေမေးနိုင်ပါတယ်။
"How long are we allowed for lunch?"
"How long is our lunch break?"
"If I only takea30 minute lunch, can I leave 30 minutes earlier?"
နေ့လည်စာစားချိန် နာရီဝက်ပဲယူရင် ညနေ နာရီဝက်စောပြန်လို့ရမလား။
"What time should I report to work?"
"Is thereastrict policy on working hours?"
အလုပ်ချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းရှိလား။ (အလုပ်နောက်ကျရင်အရေးယူတဲ့မူ)
"Are we allowed to start work an hour later if we work an hour more?"
တစ်နာရီပိုလုပ်ရင် တစ်နာရီနောက်ကျမှအလုပ်ဝင်ဖို့ ခွင့်ပြုထားလား။
"What is the dress code here?"
"Are we allowed to wear casual clothes on Friday?"
သောကြာနေ့တွေမှာ ထသွားထလာအ၀တ် ၀တ်ခွင့်ပြုလား။
"Does this company have the casual Friday thing?"
ဒီကုမ္ပဏီမှာ သောကြာနေ့မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအ၀တ်အစား ၀တ်ခွင့်ပြုတာမျိုးရှိလား။
"If I have ten vacation days, am I allowed to use them all at once?"
"What holidays do we have off?"
"Do our vacation days expire?"
"Does this company allow telecommuting?"
"Are we allowed to work from home?"
ရုံးတှငျးအထှထှေစေကားစမညျပွောစရာတှဟောတကယျတော့ မိမိသိပွီးသားစကားလုံးတှေ အပျေါမှာပဲအခွခေံပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျပွောဖို့လိုအပျတဲ့အခါ ဝါကအြဖွဈ ထှကျမလာတာ၊ ပွောတတျတဲ့သူပွောတဲ့အခါမှ “သွျော ဒါလေးမြား သိတာပေါ့” ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါဟာ input နညျးလို့ဖွဈရတာပါ။ မွငျဖူး၊ ကွားထူးထားတဲ့ဝါကလြေးတှကေို အထပျထပျလကေ့ငျြ့လိုကျရငျ အလှယျတကူပွောလာနိုငျမှာပါ။
ရုံးတဈခုမှာ မလှဲမသှထေားရှိရမညျ့ပစ်စညျးတဈခုကတော့ ဖိုငျ ပဲဖွဈပါတယျ။
ABC ဖိုငျခငျဗြားဆီမှာ ရှိလား။
တဈယောကျယောကျမြား ABC ဖိုငျကိုသုံးနလေား။
ဖိုငျထားတဲ့ဗီရိုထဲမှာ စဈကွညျ့ပွီးပွီလား။ အဲဒီမှာရှိနိုငျတယျ။
အမှိုကျပုံးထဲစဈကွညျ့လိုကျဦး။ တဈခါတဈလလေူတှကေသူတို့သုံးပွီးရငျ အဲဒီထဲလှငျ့ပဈထားတတျတယျ။
အိုး ငါ့စားပှဲပျေါမှာ။ ပွနျထားဖို့မသှေ့ားတယျ။
ရုံးထဲမှာ မိမိသုံးလိုတဲ့ ဖိုငျတဈခု၊ စာအုပျတဈအုပျကို သူမြားစားပှဲပျေါမွငျတဲ့အခါ ငှားယူတောငျးရမျး ရပါမယျ။ အောကျမှာနမူနာပွောစရာအမေးအဖွလေေးတှပေေးထားပါတယျ။
တဈခုခုလိုအပျလြှငျ ရုံးထဲက တဈယောကျပွီးတဈယောကျလိုကျမေးရတတျတာဓမ်မတာပငျဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးကို ask round ဟုချေါသညျ။ အောကျတှငျမေးခှနျးနမူနာမြားပေးထားပါသညျ။
လိပျစာကတျ(တံဆိပျ) ကုနျသှားပွီ။ ခငျဗြားမှာရှိရငျနညျးနညျးရနိုငျမလား။
ကုမ်ပဏီတိုငျးမှာ သူ့ကိုယျပိုငျစညျးမဉျြးစညျးကမျးတှရှေိတတျပါတယျ။ ဝတျစားဆငျယငျမှု၊ ခဏအနားယူခြိနျ၊ အားလပျရကျခှငျ့ စသညျ့ မူဝါဒမြား သီးခွားရှိနိုငျပါတယျ။ လူသဈတဈယောကျဆိုရငျ အဆိုပါ ပျေါလစီမြားကို သိလိုတဲ့အခါ ကိုယျ့ထကျဝါရငျ့တဲ့သူတှကေို ဒီလိုမြိုးတှမေေးနိုငျပါတယျ။
နလေ့ညျစာစားခြိနျ နာရီဝကျပဲယူရငျ ညနေ နာရီဝကျစောပွနျလို့ရမလား။
အလုပျခြိနျနဲ့ပတျသကျလို့ တငျးကပျြတဲ့စညျးကမျးရှိလား။ (အလုပျနောကျကရြငျအရေးယူတဲ့မူ)
တဈနာရီပိုလုပျရငျ တဈနာရီနောကျကမြှအလုပျဝငျဖို့ ခှငျ့ပွုထားလား။
သောကွာနတှေ့မှော ထသှားထလာအဝတျ ဝတျခှငျ့ပွုလား။
ဒီကုမ်ပဏီမှာ သောကွာနမှေ့ာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအဝတျအစား ဝတျခှငျ့ပွုတာမြိုးရှိလား။
ကဲ ဒါလေးတှလေလေ့ာပွီး ယနပေဲ့မိမိရုံးထဲမှာလကေ့ငျြ့ပွောဆိုကွညျ့လိုကျကွပါစို့။
Permalink Reply by Ye Yint Htun on November 29, 2013 at 8:34
Permalink Reply by Aung Bo Hein on November 29, 2013 at 11:00
အား​ပေး​နေပါတယ်​ အကျိုးများပါတယ်​ Thanks
Permalink Reply by Zin Mar Aye on November 29, 2013 at 11:52
thanksalot ! pls share more & more
Permalink Reply by theinthansukyaw on November 29, 2013 at 20:16
Permalink Reply by ဇွန်ဇွန် on November 30, 2013 at 11:36
Permalink Reply by Cindy on November 30, 2013 at 19:09
Permalink Reply by Miss Golf on December 1, 2013 at 13:34
Permalink Reply by saisaekham on December 3, 2013 at 12:11
Permalink Reply by thinza on December 5, 2013 at 10:47
Permalink Reply by phyo wai hlaing on August 28, 2015 at 14:40